In ka badan 50 Soomaali ah oo ku xayiran Syria iyo Wiil 11 bilood ah oo laga soo badbaadiyey – Hornafrik Media Network
Dawladda Denmark ayaa wiil Soomaali ah oo da’diisa lagu sheegay 11 bilood ka soo badbaadisay waqooyiga dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Syria, kaas oo waalidkiis ay ku dhinteen dagaalka Syria.
Ehelada qoyska uu wiilkaas ka dhashay la hadlay VOA ayaa sheegay in wiilka yar laga soo qaaday magaalada Erbil ee dhacda waqooyiga dalka Syria.
Wiilka ayaa markiisii hore laga keenay xerada Al-Xuul ee isla dalkaas, kadib markii ay xeradaas ku dhimatay hooyadiis bishii Maarso ee sannadkan.
Geerida gabadhiisa ayuu sheegay in lagu soo wargaliyey bishii Marso ee sanadkan, kadib markii madaafiic lagu garaacay xerada Al-Xuul ee dalka Syria oo ay ku noolaayeen.
Sidoo kale awoowaha wiilka yar ayaa sheegay in ninka dhalay wiilka yar oo qabay gabadhiisa uu ku dhaawacmay dagaalka ka socda dalkaas, isla markaana uusan hadda xaqiiji karin geeridiisa.
Talaadadii lasoo dhaafay ayaa awoowga wiilkaas iyo gabar uu dhalay waxa ay gaareen magaalada Erbil ee dalka Syria, si ay halkaas uga soo qaadaan wiilka yar oo sida ay sheegeen badbaadintiisa ay ku gacan siinaysay dowladda Denmark.
Gabadha Soomaalida ah ayaa bartamihii bishan lagu soo celiyey dalka Jarmalka, waxaana wali ku socda baaritaano ay wali ku wadaan laamaha amniga.